LokaChantha: April 2012
Kids from local school in Marlboro township come to NJ Meditation Center today April 30, 2012. They plant trees and learn meditation from 10 am to 1 pm.
Posted by LokaChantha at 8:19 PM No comments:
Posted by LokaChantha at 10:25 AM No comments:
မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ဆုတောင်း မေတ္တာပို့သပွဲ ဓာတ်ပုံများ (၁၅-ဧပြီလ-၂၀၁၂)
Posted by LokaChantha at 3:35 PM No comments:
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၄ ရက် စနေနေ့တွင် နယူးယောက်မြို့ လောကချမ်းသာဘုရားကျောင်း၌ ဓမ္မသင်တန်းသူ သင်တန်းသားများအပြင် ဧပြီလ ၁၅ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ကျင်းပမည့် မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ဆုတောင်း မေတ္တာပို့သပွဲအတွက် ရောက်ရှိနေကြသော ဝေယျာဝစ္စအဖွဲ့သူ အဖွဲ့သားများ၊ လုပ်အားပေးများဖြင့် စည်ကား၏။
မွန်းလွဲ ၁း၅၅ နာရီတွင် လောကချမ်းသာဆရာတော်က ဝိသုဒ္ဓိခုနစ်ပါးအနက် စိတ္တဝိသုဒ္ဓိအကြောင်းအကျဉ်း လောကချမ်းသာ ၅-မိနစ်တရားတော်ကို ဟောကြား ချီးမြှင့်ပြီး၊ ၃-နာရီထိ တရားရှုမှတ် ပွားများကြ၏။
မွန်းလွဲ ၃း၁၅ နာရီတွင် ဆရာတော် အရှင်စက္ကိန္ဒက ဓမ္မပဒ၊ ယမကဝဂ် ဂါထာများကို ပြန်လည် ပို့ချ သင်ကြားပေး၏။
မွန်းလွဲ ၄ နာရီခွဲတွင် ဆရာတော် အရှင်ဝဏ္ဏိတက အဘိဓမ္မာ၊ ပကိဏ်းပိုင်း အာရမ္မဏသင်္ဂဟကို ဆက်လက် သင်ကြား ပို့ချပေး၏။
လောကချမ်းသာ ဆည်းဆာတရားပွဲအဖြစ် ဆရာတော် အရှင်ဝိမလက “လောဘ ဒေါသ နည်းပါးစေရေး”တရားတော်ကို ဓမ္မဒါနပြု ဟောကြား၏။
Posted by LokaChantha at 11:28 PM No comments:
ဓမ္မာရုံဟောင်း၊ ကျောင်းဟောင်းနှင့် ကျောင်းဆောင်သစ် ဆက်သွယ် (ဧပြီ ၁၀၊ ၂၀၁၂)
Posted by LokaChantha at 10:45 PM No comments:
``အို ... ရဟန်း၊ မိမိကိုယ်ကို မိမိ တိုက်တွန်း ဆုံးမလော့။
မိမိကိုယ်ကို မိမိ စုံစမ်း ဆင်ခြင်လော့။
မိမိကိုယ်ကို စောင့်ရှောက်၍ သတိနှင့် ပြည့်စုံလျှင် သင်သည် ချမ်းသာစွာ နေရလတ္တံ့။
မိမိသည်သာလျှင် မိမိ၏ ကိုးကွယ်ရာ ဖြစ်၏။
မိမိသည်သာလျှင် မိမိ၏ (နောင်ဘ၀အတွက်) သွားရာ (မှီခိုရာ) ဖြစ်၏။
ထို့ကြောင့် မြင်းကုန်သည်သည် အမျိုးကောင်းသော မြင်းကို ကောင်းစွာ စောင့်ရှောက်သကဲ့သို့ မိမိကိုယ်ကို (အကုသိုလ်ကင်းအောင်) စောင့်ရှောက်လော့။´´
ဓမ္မပဒ ၃၇၉-၃၈၀ (ဆရာတော် အရှင်သေဋ္ဌိလ မြန်မာပြန်)
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၇-ရက် စနေနေ့
မွန်းလွဲ ၂ နာရီမှ ၃ နာရီ တရားမထိုင်မီ လောကချမ်းသာ ငါးမိနစ်တရားတော်ကို လောကချမ်းသာဆရာတော်က ဟောကြား၏။
၀ိသုဒ္ဓိ ခုနစ်ပါး အစပျိုး သီလ၀ိသုဒ္ဓိအကြောင်း ဟောကြား၏။ ကနေဒါနိုင်ငံမှ နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးလည်း ရောက်ရှိ တရားထိုင်သဖြင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်လည်း အချို့အ၀က် ရှင်းလင်း ဟောကြားလေသည်။
မွန်းလွဲ ၃း၁၅ နာရီတွင် ဆရာတော် အရှင်စက္ကိန္ဒက သင်ကြားပြီးသွားသည့် ဓမ္မပဒ၊ ယမက၀ဂ်လာ ဂါထာများကို အချုပ်အားဖြင့် ပြန်လည် ရှင်းပြ သင်ကြား ပို့ချပေး၏။
ညနေ ၄ နာရီခွဲ အဘိဓမ္မာသင်တန်းတွင် ဆရာတော် အရှင်ဝဏ္ဏိတက ပကိဏ်းပိုင်း၊ အာရမ္မဏသင်္ဂဟကို ဆက်လက် သင်ပြ ရှင်းပြ ပို့ချပေး၏။
ညနေ လောကချမ်းသာ ဆည်းဆာတရားပွဲတွင် အရှင်ပညာဇောတက ဓမ္မပဒ ဂါထာ အမှတ် ၃၇၉-၃၈၀ လာ နင်္ဂလကုလတ္ထေရ၀တ္ထုကို အခြေခံ၍ ``ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာ အားကိုးပါ´´တရားတော်ကို ဓမ္မဒါနပြု ဟောကြား၏။
နုပျိုနေတဲ့ ငါရဲ့ ခန္ဓာ
မြတ်ဓမ္မ နေ့ည ဆင်ခြင်ပါ။
ကျန်းမာနေတဲ့ ငါရဲ့ ခန္ဓာ
သက်ရှင်နေတဲ့ ငါရဲ့ ခန္ဓာ
မသစ်ချင်သစ်၊ သစ်ချင်သစ်၊ သစ်ကြ မျက်နှာရေ။
မျက်စိနားနှာ၊ သွားနှင့်လျှာ၊ အာမှာ ချေး(ကြေး)ညှော်တွေ။
မစားချင်စား၊ စားချင်စား၊ ဆေးဝါး ဓာတ်စာတွေ။
ကိုးဆယ့်ခြောက်ဖြာ၊ ဘေးရောဂါ၊ ကိုယ်မှာ ရှိ၍နေ။
မပြုချင်ပြု၊ ပြုချင်ပြု၊ ကောင်းမှု ကုသိုလ်တွေ။
ကိုယ်တွင်းရောဂါ၊ ကိလေသာ၊ ကိုယ်မှာ ရှိ၍နေ။
တရားပွဲပြီးသော် တနေ့တာ ပြုခဲ့သမျှ ကောင်းမှုကုသိုလ်တို့အတွက် တောင်းဆုခြွေ၍ ကောင်းမှုကုသိုလ်အမျှကိုလည်း ပေးဝေကြလေသည်။
Posted by LokaChantha at 7:00 PM No comments:
သင်္ကြန်အကြောင်း တစေ့တစောင်း - အရှင်နန္ဒဝံသ (ဇေယျသုခဓမ္မရိပ်သာ)
သင်္ကြန် ... သြော် သင်္ကြန် ... နှစ်အကူး ရွှင်မြူးလေတဲ့ သင်္ကြန် .. တဲ့။ သီချင်းတွေလဲ ကြားဖူးရဲ့ ... သင်္ကြန်မှာ ပျော်ရွှင်နေကြသူတွေကိုလဲ တွေ့ဖူးခဲ့ပေမယ့် ‘သင်္ကြန်’ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို စေ့စေ့ငုငု ထဲထဲဝင်ဝင် ကျကျနန နားမလည်ခဲ့တာ အမှန်ပါ။ ငယ်ရွယ်သူတွေက သိလိုရေးနဲ့ မေးလာတဲ့အခါ သူတို့ သဘောကျအောင် ဖြေစရာ သိပ်မရှိခဲ့ဘူး။ ဒါနဲ့ စာပေတွေထဲ သင်္ကြန်အကြောင်း တစေ့တစောင်းဆိုသလို ဖွေရှာ လေ့လာကြည့်မိပါတယ်။
သင်္ကြန်ပွဲတော်ဟူသည် မြန်မာပြည်အပါအဝင် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာ နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ ကျင်းပကြတဲ့ ပွဲတော်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ “ကူးပြောင်းခြင်း”, “ပြောင်းရွှေ့ခြင်း”ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသော ပါဠိဘာသာ “သင်္ကန္တ”၊ သက္ကတဘာသာ “သင်္ကြန္တ”တို့ကို တိုက်ရိုက် မြန်မာမှုပြု၍ ခေါ်ဆိုကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ဒီ ပါဠိဘာသာ “သင်္ကန္တ”၊ သက္ကတဘာသာ “သင်္ကြန္တ”ကနေ ဆင်းသက်လာတဲ့ ဝေါဟာရဟာ သက်ဆိုင်ရာ ဒေသနေ ပြည်သူတွေရဲ့ ဘာသာစကား ယဉ်ကျေးမှု ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေပေါ် မူတည်ပြီး ကွဲပြား ခြားနားမှု ရှိတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာတို့ရဲ့ “သင်္ကြန်”၊ ထိုင်းတို့ရဲ့ “ဆွန်ကရန်” (Song Kran)၊ ကမ္ဘောဒီးယားတို့ရဲ့ “ချိုချနန်သမေး” (Chol Chnam Thmey)၊ လာအိုတို့ရဲ့ “ဘီးမိုင်” (Bpee Mai)နဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် ဒိုင်လူမျိုးတို့ရဲ့ “ရေသဘင်ပွဲ”ဆိုတဲ့ “နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်”တို့ဟာ တစ်ခုတည်းသော ရင်းမြစ်က ဆင်းသက်လာတဲ့ ပွဲတော်များ ဖြစ်ပါတယ်။
အချင်း ယူဇနာ ၅၀၊ လုံးဝန်း ယူဇနာ ၁၅၀ ရှိပြီး အတွက်းဘက်ကား ရွှေ၊ အပြင်ဘက်ကား ဖလ်သားအတိနဲ့ ပြီးသော ‘ဘာဏုရာဇာ’မည်တဲ့ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်မင်းဟာ နဝင်းတစ်လုံးမှ နေပြီး နဝင်းတစ်လုံးဆီ၊ နက္ခတ်တစ်လုံးမှ နက္ခတ်တစ်လုံးဆီ၊ တစ်ရာသီမှ တစ်ရာသီသို့ အစဉ်လိုက် ‘ပြောင်းရွှေ့ခြင်း’ကို အစွဲပြုလို့ သင်္ကြန်ခေါ်ဆိုကြောင်း လောကီကျမ်းများအရ သိရပါတယ်။ ဒီတော့ သင်္ကြန်ဆိုတာ ‘ပြောင်းလဲခြင်း’၊ ‘ပြောင်းရွှေ့ခြင်း’လို့ အကျဉ်းအားဖြင့် မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။
သင်္ကြန်ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို အကျဉ်းမျှဖြင့် သဘောပေါက် နားလည်ဖို့ မလွယ်ကူဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အကျယ်ချဲ့ လေ့လာ ရှာဖွေ မှတ်သားမိပါတယ်။
“ဤကမ္ဘာမြေကြီးသည် နေကို ဗဟိုပြု၍ မိဿရာသီမှ စ၍ ပြိဿ၊ မေထုန်၊ ကရကဋ်၊ သိဟ်၊ ကန်၊ တူ၊ ဗြိစ္ဆာ၊ ဓနု၊ မကာရ၊ ကုံ၊ မိန် ဟူသော ဆယ့်နှစ်ရာသီခွင်တို့သို့ အစဉ်လိုက် ကူးပြောင်း လှည့်လည်ပြီးနောက် ရက်ပေါင်း ၃၆၅ ရက်၊ ၆ နာရီ၊ ၁၂ မိနစ်၊ ၃၇ စက္ကန့်ပြည့်သောအခါ မိဿရာသီ အစဖြစ်တဲ့ အဿဝနီနက္ခတ် ပထမပတ်သို့ စတင် ဝင်ရောက်ပါတယ်။ ယင်းသို့ ရာသီခွင်တစ်ပတ်လည် ဝင်ရောက်စအချိန်ကို ရာသီတစ်ခုမှ ရာသီတစ်ခုသို့ ကူးပြောင်းသောကြောင့် “သင်္ကြန်”ကျသည်ဟု ခေါ်ဆိုပါတယ်။
စူဠ မဟာ သင်္ကြန်အခါ
တစ်နှစ်မှာ နဝင်းအရေအတွက် ၁၀၈-နဝင်း ဖြစ်၍ သင်္ကြန် ၁၀၈ ကြိမ်၊ နက္ခတ် ၂၇-လုံး ဖြစ်၍ သင်္ကြန် ၂၇ ကြိမ်၊ ရာသီ ၁၂-ခု ဖြစ်၍ သင်္ကြန် ၁၂ ကြိမ် ကျသည်၊ ၁၂ ကြိမ် ကူးပြောင်းသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ယင်း ကူးပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် သင်္ကြန်ကျခြင်းတို့မှာ “သာမည ကူးပြောင်းခြင်း” ဖြစ်၍ “အငယ်စား - စူဠသင်္ကြန်”တို့သာ ဖြစ်နေသည့်အတွက် လူတို့က အလေးအနက် မထားကြပါဘူး။
ဂြိုဟ်အပေါင်းတို့၏ မိခင်ဖြစ်သော တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်ကိုသာ အလေးဂရုပြုကာ နှစ်၊ လ၊ ရက်တို့ကို မှတ်သားကြသောကြောင့် တနင်္ဂနွေဂြိုဟ် ပြောင်းရွှေ့ ကူးပြောင်းခြင်းကိုသာလျှင် “သင်္ကြန်”ဟုလည်းကောင်း၊ “သင်္ကြန်ကြီး - မဟာသင်္ကြန်”ဟုလည်းကောင်း အလေးအမြတ်ပြု မှတ်သားလျက် သင်္ကြန်ပွဲတော် ဆင်နွှဲ ကျင်းပကြပါတယ်။
ထို့ကြောင့် ဧပြီလအစပိုင်း သို့မဟုတ် အဆုံးပိုင်း ရက်များတွင်ဖြစ်စေ၊ မေလ, ဇွန်လ, ဇူလိုင်လများတွင်ဖြစ်စေ ကျင်းပလေ့ရှိကြသော အနောက်နိုင်ငံများနေ မြန်မာတို့၏ သင်္ကြန်ပွဲများသည် “မဟာသင်္ကြန်ပွဲ” မဟုတ်ဘဲ “စူဠသင်္ကြန်ပွဲ”များသာ ဖြစ်သည်ဟု သတိပြု နားလည်ရမည် ဖြစ်ပါတယ်။
သင်္ကြန်ကြို အကျ အယူအဆ
တာဝတိံသာနတ်ပြည်မှ သိကြားမင်းသည် သင်္ကြန်ကျချိန်မှာ လူ့ပြည်သို့ ခေတ္တခဏ ဆင်းလာလေ့ရှိပါတယ်။ သိကြားမင်း လူ့ပြည်ဆင်းချိန်သည် “သင်္ကြန်ကျချိန်”ဖြစ်၍ မဆင်းမီ တစ်ရက်အလို သိကြားမင်းကို ကြိုဆိုသောနေ့ကို “သင်္ကြန်အကြိုနေ့”ဟု ခေါ်ဆိုကြတယ်ဟု ယူဆ ဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။
အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် သင်္ကြန်ကျမည့်ရက်ကို အလွယ်တကူ သိနိုင်သောနည်းမှာ လွန်ခဲ့သောနှစ် သင်္ကြန်အတက်ရက်မှ စ၍ ရေတွက်လျှင် ၃၆၄-ရက်မြောက်နေ့သည် ယခုရောက်ဆဲနှစ်၏ သင်္ကြန်အကျနေ့ပင် ဖြစ်ပါတယ်။
အတိအကျအားဖြင့် လွန်ခဲ့သောနှစ် သင်္ကြန်ကျသောနေ့ရက်အချိန်မှ ၃၆၅ ရက်၊ ၆ နာရီ၊ ၁၂ မိနစ်၊ ၃၇ စက္ကန့်ပြည့်သော အချိန်နေ့ရက်သည် ယခုရောက်ဆဲနှစ်၏ သင်္ကြန်အကျနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒါတွေက သင်္ကြန်အခါမှာ -
အတာစားခြင်း၏ အကျိုးကား ... အတာပုည၊ ကုသလကို၊ ပြုကြကုန်သော၊ အမျိုးသား အမျိုးသမီးတို့သည် “အတာကမ္မံ ကရောန္တဿ မဟာဘောဂံ မဟာသုခံ မဟပ္ဖလံ စတုဒ္ဒိသံ ဝေရီဇေယျသုမင်္ဂလံ”ဟု ရှေးပညာရှိတို့ ရေးဖွဲ့ခဲ့သည်နှင့်အညီ ထိုကဲ့သို့ ရတနာသုံးပါး စသည်တို့အား လှူဒါန်း ပူဇော်ကြသော သူတို့သည် ကောင်းကျိုးချမ်းသာ မင်္ဂလာတရား ပြန့်ပွားတိုးတက် ပြည့်စုံကုန်ရာသည် ... ဟု မှတ်သားရဖူးပါတယ်။
သင်္ကြန်ရောက်ပြီဆိုပါလျှင် အစဉ်အလာအားဖြင့် ဦးခေါင်းဆေးမင်္ဂလာကိုလည်း ပြုလုပ်လေ့ရှိကြပါတယ်။
ရှေးမြန်မာတို့သည် မိမိတို့၏ ကိုယ်အင်္ဂါတွင် အမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်သော ဦးခေါင်းတွင် နှစ်ဟောင်းက ကပ်ငြိစွကျန်နေသော အညစ်အကြေးများ နှစ်သစ်သို့ ဆက်လက် မပါရှိစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဦးခေါင်းဆေးမင်္ဂလာ ပြုခဲ့ကြပြီး အတိတ်ကောင်းယူကာ ကိုယ်စိတ်သန့်ရှင်းမှုကို အကျိုးပြုရာရောက်သည်ဟု ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။
ဦးခေါင်းဆေးမင်္ဂလာပြုလုပ်သောကြောင့် အကျိုးရပုံကို သင်္ကြန်စာများတွင် အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားတာကို ဖတ်ရှု မှတ်သားရဖူးပါတယ်။
“ဦးခေါင်းဆေးရသောအကျိုးကား - သင်္ကန္တေ၊ သင်္ကြန်ဟု ခေါ်ဆိုအပ်သော တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်မင်းသည်။ ပုဏ္ဏမေ၊ အံသာ(၃၆၀)ရသဖြင့် တဘဝဝဏပြည့်၍ မိန်ရာသီ အဝသာန် နဝင်းမှ မိဿရာသီ အာဒိနဝင်းသို့ ပြောင်းခဲ့သည်ရှိသော်။ ဣဓ၊ ဤလူ့ပြည်၌။ မာဏဝါ၊ သတ္တဝါဟုခေါ်ဝေါ်အပ်ကုန်သော။ မနုဇာ၊ လူအပေါင်းတို့သည်။ သိရာ၊ ဦးခေါင်းဆေးကုန်ရာ၏။
တေသံ၊ ထိုဦးခေါင်းဆေးကုန်သော သူတို့အား။ သတ္တဘာဂီ၊ ခုနစ်နှစ်ကဖြစ်ကုန်သော။ ရောဂီ၊ အနာမျိုးတို့သည်။ ဝိနာသေယျုံ၊ ကင်းပျောက်ကုန်ရာ၏။ သုခဘာဂီ၊ ချမ်းသာဖြင်း၏အဖို့ဖြစ်ကုန်သော။ သတသဟဿာနိ၊ တစ်သိန်းသော အကျိုးတို့သည်။ ဘဝေယျုံ၊ ဖြစ်ကုန်ရာ၏။”
အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း နှစ်သစ်မှာ ကောင်းကျိုးကျက်သရေ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံရအောင် သင်္ကြန်ကာလများမှာ ဦးခေါင်းဆေးမင်္ဂလာများ ပြုလုပ်ရခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ နားလည်ရပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်မူ သင်္ကြန်ဆိုတာ ပြောင်းလဲခြင်းလို့ နားလည်ခဲ့ရပါပြီ။ ဒီပြောင်းလဲခြင်းဟာ ဘယ်တော့များမှ အဆုံးသတ်ပါလိမ့်ဟုလည်း တွေးကြည့်မိပါတယ်။ ပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့ သံသရာတခွင် ကျင်လည်ရအုန်းမယ်ဆိုရင် နိမ့်တုံတခါ မြင့်တုံတလှည့် ပြောင်းလှည့်နေအုန်းမှာဖြစ်တော့ တော်ရုံနဲ့ အဆုံးမသတ်နိုင်ဘူးလို့ တွေးမိပါတယ်။
လောကကြီးထဲမှာ လူဖြစ်လာပြီး ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ ရှာဖွေ လှည့်လည်နေကြသူတွေဟာ တနေရာကနေ တနေရာဆီ ပြောင်းရွှေ့ပြီဆိုရင် ကိုယ်နဲ့ဆိုင်သည့် ပစ္စည်းများကို သိမ်းဆည်း သယ်ဆောင်သွားတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလိုအခါမျိုးမှာလည်း ကောင်းနိုးရာရာ တန်ဖိုးရှိသည့် မိမိနဲ့ အသုံးတည့်သော အရာများကို သိမ်းဆည်းလေ့ရှိကြပါတယ်။ တန်ဖိုးမဲ့တဲ့အရာတွေကို စွန့်ထားခဲ့ပြီး တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းများကိုသာ မိမိနဲ့တပါတည်း သယ်ဆောင်သွားတတ်ကြတာကို သတိပြုမိပါတယ်။
ဒီလိုပါပဲ ... မိမိတို့ဟာ မမြဲသော သင်္ခါရလောကနယ်မှာ လူဖြစ်လာကြသူတွေမို့ တနေရာတည်းမှာ ထာဝရဆိုတာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့။ နိမ့်ရာကနေ မြင့်ရာဆီ၊ ဆိုးရာကနေ ကောင်းရာဆီ၊ ကျရှူံးမှုမှသည် အောင်မြင်မှုဆီ၊ ဒေသတစ်ခုကနေ ဒေသတစ်ခုဆီ စသည် စသည်ဖြင့် ပြောင်းရွှေ့ရမှာတော့ သေချာပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ဒီဘဝ ဒီခန္ဓာကို စွန့်ခွာလို့ တမလွန်ဆိုတဲ့ နောင်ဘဝဆီ ပြောင်းရွှေ့ရအုန်းမယ်။
သတ္တဝါတွေမှာ ကံသာလျှင် ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိပေရာ ဒီလို ပြောင်းရွှေ့တဲ့အခါမှာ တန်ဖိုးနည်းပြီး အပါယ်ကို ဆွဲချနိုင်တဲ့ အကုသိုလ်ကံ ဥစ္စာတွေကိုပဲ သိမ်းဆည်း သယ်ဆောင်သွားကြမည့်အစား တန်ဖိုးကြီးမြင့်ပြီး မြင့်မြတ်သော အထက်တန်းကျ မျက်နှာပန်းလှတဲ့ ဘုံဘဝတွေကို ရောက်စေနိုင်သည့် ကုသိုလ်ကံတည်းဟူသော ဥစ္စာတွေကို သယ်ဆောင်သွားနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးမဟုတ်ပါလား။
ဒါကြောင့် တစ်နှစ်မှသည် တစ်နှစ်ဆီသို့ ရွှေ့ပြောင်းသော ဒီသင်္ကြန်အခါ သင်္ကြန်အကြောင်း လေ့လာဆည်းပူးရင်း နှစ်သစ်ကြိမ်ရာ မင်္ဂလာရှိသော သင်္ကြန်အခါကာလမှာ ကောင်းမြတ်လှသော ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ မြတ်ကောင်းမှုတွေကို ကြိုးစားပြုလို့ နှစ်ဟောင်းက အကုသိုလ်အညစ်ကြေး အပြစ်ဘေးထိုက်သည့် ဒုစရိုက်တွေကို နှစ်ခဲ့ ပစ်ခဲ့ကြပါစို့လား၊ နှစ်သစ်မှာ ကုသိုလ် သုစရိုက်တရားတွေနဲ့ ဘဝကို သစ်လွင်တောက်ပြောင်လာအောင် ရွက်ဆောင်ကြပါစို့လားလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။
(စာရေးသူရဲ့မှတ်စုများ၊ သင်္ကြန်စာ၊ အင်တာနက်ဘလော့ဂ်ပို့စ်များမှ ကောက်နုတ် ကိုးကားပါတယ်။ အင်တာနက်ဘလော့ဂ်ပို့စ် မူရင်းပိုင်ရှင်များကို မှတ်ယူမထားမိတာ ခွင့်လွှတ်စေလိုပါတယ်။)